FLOW, GUSH, POUR, RUN , SPOUT , SPURT , SQUIRT , STREAM
1. ဤစကားလုံးများသည်​ ​ရေ၊ အရည်​ အမျိုးမျိုးနှင့်​ အမှုန်​က​လေးများ လှုပ်​ရှား စီးဆင်းခြင်းကို ​ဖော်​ပြရာတွင်​ သုံးသည်​။
2. FLOW သည်​ ဆက်​တိုက်​လွတ်​လပ်​စွာ မှန်​မှန်​ ​ဖြေး​ဖြေးစီးဆင်းသည့်​ သ​ဘောဖြစ်​သည်​။
The river flows မြစ်​​ရေသည်​ စီးဆင်း​နေသည်​။
Air current flows from west to east
​လေစီး​ကြောင်းသည်​ အ​နောက်​မှ အ​ရှေ့သို့ တိုက်သည်​။
3. RUN သည်​ FLOW ထက်​ ပိုမို၍ လျှင်​မြန်​​သော စီးဆင်းမှုကို ​ဖော်​ပြသည်​။ အရည်​များအတွက်​ အထူးသုံးသည်​။ စီးဆင်းမှုသည်​ နည်းနိုင်​သည်​ များနိုင်​သည်၊​ လမ်း​ကြောင်းရှိ နိုင်​သည်​ လမ်း​ကြောင်း ကင်းမဲ့စွာလည်း စီးဆင်းနိုင်​သည်​။
Water is running down the window .
​ရေသည်​ ပြူ တင်း ​ပေါက်​ ​ပေါ် တွင်​ စီး ဆင်း ​နေ သည်​။
In which direction does the river run .?
မြစ်​သည်​ ဘယ်​ကို စီးဆင်း ​နေသနည်း?
4. POUR သည်​ အ​ပေါ်မှ ​အောက်​သို့ စီးကျ ခြင်း ဖြစ်​သည်​။
Water is pouring over the dam.
​ရေသည်​ ​ရေကာတာ​ပေါ်မှ စီးကျ​နေသည်​။
5. STREAM သည်​ ​ ​ရေစီး​ကြောင်းပမာ အရာဝတ္ထုများ စီး​နေသည့်​ အဓိပ္ပါယ်​ ဖြစ်​သည်​။
Cars are streaming over the bridge .
​မော်​​တော်​ကားများသည်​ တံတား​ပေါ်တွင်​ စီးဆင်း​နေသည်​။
Tears are streaming down her face .
သူ့ မျက်​နှာ​ပေါ်တွင်​ မျက်​ရည်​များစီးကျ​နေသည်​။
6. GUSH သည်​ ရုတ်​တရက်​ ပန်းထွက်​သည်​ဟု ဆိုလိုသည်​ ။
Blood is gushing from his head.
သူ့​ခေါင်းက ​သွေး​တွေ ပန်းထွက်​​နေသည်​။
Water is gushing out from the fountain.
​ရေသည်​ ​ရေပန်းမှ ပန်းထွက်​​နေသည်​။
7. SPOUT သည်​ ဆက်​တိုက်​ ပန်းထွက်​​နေသည်​ဟု ဆိုလိုသည်​။
Water is spouting from the leaky pipe.
​ရေသည်​ ပိုက်​​ပေါက်​မှ ပန်းထွက်​​နေသည်​။
8. SPURT သည်​ ​သေးငယ်​​သော ပန်းထွက်​မှုများကို ​ဖေါ်ပြသည်​။ အစက်​က​လေးများကျခြင်း ကိုလည်း​ခေါ်သည်​။
The needle spurts outafew drops.
9. SQUIRT သည်​ ခပ်​ဝေး​ဝေးမှ ပန်းထွက်​ခြင်းကို ​ဖေါ်ပြသည်​ ။
Water squirts from the fire hose.
10. ဆင်​တူစကားလုံးများ Flood , Leak
11. ဆန့်​ကျင်​ဘက်​များ Congeal , freeze ', stagnate